Maxa dhacay?! W/Q Bashir M. Hersi | RBC Radio	Home
Wednesday, September 12th, 2012 at 07:49 am	/ 4 Comments Thursday, September 13th, 2012 at 12:39 am Maxa dhacay?! W/Q Bashir M. Hersi
Hubaal in labada Shariif la nacay, Allaw Karaahiya ha naga dhigin!, sida loo nacay miyaa loo soo dhaweey Xasan Sheekh? Mise wax kale ayaa jira oo naga qarsoon? Labada Shariif inay is raaceen xaq bay ahayd, inaysan kala harin hanuun bay ahayd, waa meeshaan ka dhihi jiray Shaydaanba ha badalee inay baxaan way ahayd! Balse, maxaa noo xiga? Weydiinta madaxa daalinaysa waa middan oo aanba is leeyahay kuwii hore waa ka sii adag tahay, maxaa yeelay ka wercelinteedu waa fashal ama guul!
Tags: Bashir M. Hersi, Maxa dhacay?!	7 Responses for “Maxa dhacay?! W/Q Bashir M. Hersi”
Maxa dhacay?! W/Q Bashir M. Hersi | Gubta News Network says:	September 13, 2012 at 1:11 am	[...] More: Maxa dhacay?! W/Q Bashir M. Hersi [...]
Gaarhayeen says:	September 13, 2012 at 2:22 am	Cidda maal gelisay ayuu u shaqayn doonaa Soomaaliduna marka ay laab la kaca ka soo baraarugto ayay isweydiin doontaa maalka doorashadu meesha uu ka yimid iyo danaha ka dambeeya. Anigu waxaan tuhunsanahay Masar oo dano ka leh Soomaaliya, danahaas oo qaar la xiriira biyaha webiga Niil iyo Itoobiya. Waxaa xusid mudan in dagaalkii ’77-dii markii dalalkii Africa iyo caalamku Soomaaliya uga digeen dhibaatooyinka ka imaan kara, Masar ahayd dalkii dhiirrogeliyey Soomaaliya, ka dib na markii arrintu talo beeshay ku yiri isaga soo baxa!
Marka maxay tahay danta Soomaaliya laga lahaan karo iyo cidda maal gelisay hoggaanka siyaasadda ku cusub ee sida lama filaanka ah u hantay talada dalka ugu sarraysa? Maxaa loo waayey su’aalo iyo jawaabo dheellitiran? Waad ogsoon tihiin qorshihii Baadiyoow ee laga hagayey Masar, marka Xasan Sh. Maxamuud ma dhabbadaas ayuu qaadi rabaa oo dalka ku hagi doonaa mise?
garyaqaan mpls says:	September 13, 2012 at 5:05 am	waligaa maantaad su aalo macquul ah la timid.
waa run in la is weydiiyo yaa maal galiyay?
MISE NACEYBKA LABADA SHARIIF BUU JAANIS KA HELAY.
WAA SUAALO LA IS WEYDIIN KARO.
BALSE WAXEY AHAATABA ILLAHAY KHEYR HANOOGA DHIGO KOLAYBA HADA WAAN LAWADA DHCSANAHAY.
WAR JIRAABA CAKAARUU IMAAN.
runta says:	September 13, 2012 at 5:14 am	Kan wuxuu jecelyahay in uu wax iska qor qoro kkkkk wasiiradan aad qaybinayso qaar ka gadan maaha soomalida adiga iyo yuusuf garaadna waan ognahay in hal mad-hab haystaan halagu arko. Bashiir
Mohamed Ali says:	September 13, 2012 at 5:39 am	Qoraalka wax badan ayaan kugu racsanahay balse nimnaka aad tiri wasiirro halaga dhigo. kow Axmed muumin waa oday in uu hawlgabaa u fiican markii uu adduunka ka soo hawl gabay Somaliyana ha ka hawl gabo. Yusuf-garaad ka dhig af-hayeenka dawladda ama madaxweyha ha gaadhsiin wasiir waa nin aad u qabyaalad badan… Cabdi shire maareyaha wasaaradda Murtida iyo madadaalada maad ka dhigtid. Axmed Ismciil waa nin wax weyn soo kordhin kara dhibaatadiisu waa nin islaweyn oo cid kale in ay wax garanyso aan ogeyn balse isaga waan kugu raacsahay in wasiirka arrinaha dibadda laga dhigo. waa intaas uu aqoontiisu wax ka beddesahhaye.
wadaad yare says:	September 13, 2012 at 10:23 am	Madaxweynaha cusub isagu ma ahan xubin, laakiin wuxuu taageero ka heley kooxda “al damul jadiid” oo ah koox ay isku baheysteen dhallin yaro ka fallaagowgey Islaaxa. Islaaxa waxaa u sharraxnaa Cabdi Raxmaan Baadiyow. Islaaxu waa urur la mid ah Ikhwaanka Masar hadda xakuma, Xamaasta Ghaza xakunta iyo Nahdada Tuunisiya xakunta.
Madaxweynaha cusub wuxuu kaloo taageero ka heley ururrada bulshada rayidkaa oo uu ka tirsanaa.
Markaan arrimahaas eegno waa nin aan ku imaan taageero qabiile ku yimid taageero dad si kale oon qabiil aheyn u abaabulan. Cabdi Qaasimna sidoo kale ururka Islaax ayey ahaayeen kuwii u sahley inuu madaxweyne noqdo.
Dadka qaar ururrada diinigaa sas ayey ka qaadeen, aniguse kuwa wax dilka iyo xoogga wax ku raadinaya unbaan col la ahey laakiin kuwa miyirka qaba sida Ikhwaanka saaxiib ayaan la ahey.
Haddii qofku hayo is abaabul kale oo xisbi oo ka hufan ururrada diinigaa wuu taageeri karaa. Laakiin haddey noqoto inaan kala dooranno siyaasi qabiilkiisu soo dirsadey iyo siyaasi ay soo dirsadeen dad soomaaliyeed oo kala qabiil ah oo is baheystey, daacadna u ah dalkooda oo wanaag la doonaya keen taageereynaa?
Bishardi inuusan qofku na dileyn, waxa naga dhaxeeyana uusan dooneyn inuu naga boobo sida Salafiyada oo kale.
Hadda Sheekh Shariif waa kaas oo si sahlan ayuu iskaga wareejiyey taladii? Ma laga helayaa sidaas wadaad Salafi ah ama Wahaabi?
Mayee Wahaabigu wuxuu isku heystaa hadduu kursi ku fariisto, taageerayaashiisuna u heystaan inuu Ilaahey meesha u fadhiyo Ilaahey kaliyana uu ka qaadi karo” macnaha inuu dhinto”!
Ikhwaanka iyo Wahaabiyada farqi macno sameynaya ayaa u dhaxeeya xagga siyaasadda!
Fikirka Wahaabigaa oo siyaasadda ku wajahan waxba ugama geddisna kan Shabaabka ood aragteen.
Wuxuu ku saleysanyahey kaligi talisnimo magac diineed huwan oo sharciga Islaamka loo adeegsado in xukunka la boobo xoogna lagu heysto.
Waa in caammada iyo carruurtaba la baraa kooxaha fikirkooda siyaasadeed oo ku wajahan bulshada.
Fikirkaas siyaasadeed ayaa ka muhimsan kana saameyn badan dhanka bulshada qofka caqiidadiisa diineed oo u gaarkaa iyo cibaadadiisa. Taas isaga iyo Ilaahey ayey ka dhaxeysaa. Laakiin bulshada maxaad ka aamminsantahey, sideed ula dhaqmeysaa ayaa khuseysa.
cawaale says:	September 14, 2012 at 11:58 am	waxay ila tahay in la sugo jawaabaha madazwaynaha